Mhlawumbe wonke ubhekene nesimo lapho into nje ukuthi kufanele uthenge nokulungiswa kancane. Ngokwesibonelo, kubalulekile ukuthatha okuthile noma umphetho ibhulukwe. Kodwa ngezinye izikhathi awunawo isikhathi ukufaka into entsha studio. Uma une umshini wokuthunga ekhaya, khona-ke ukukwenza ngezandla zakho akunzima. Ukuze usebenze udinga Trousering eteyipini, umbusi ucezu wokulinganisa.
Classic ibhulukwe zabesilisa: indlela Umphetho
umfuziselo okunjalo ukukhumula ibhulukwe elingaphezulu has izici zayo siqu. It wendwangu kungenziwa ithungwe kuphela isigamu ezingemuva sihloko. Lokhu kuyadingeka ukuze zingagugi indwangu enkulu.
Ekuqaleni, le ndoda kufanele bagqoke ibhulukwe ukunquma ngokunembile ubude. Ungenza izicathulo kufaneleka-ke onqenqemeni engezansi umlenze trouser kufanele ibekwe phakathi isithende ingxenye futhi isithende sayo. Uma ulinganisa ubude izicathulo ke umngcele umphetho kufanele kube amamilimitha angu amahlanu ukusuka phansi enhlabathini. Ungakhohlwa itshwayo ngoshoki noma ukubulala izikhonkwane trouser umlenze.
Thina ukumaka ubude edingekayo
Ngaphambi okucindezelayo ibhulukwe, udinga ukwenza ukubala olunembile. Ukuze wenze lokhu, uyibeke phezu flat. Dweba insipho noma imigqa emibili engajulile. Yenza lokhu nombusi. Okokuqala - lokhu Imi umugqa, kwesibili - ubude ibhulukwe off eshalofini. Thenga umphetho kufanele ibe mayelana ezinhlanu ngamasentimitha. Qondisa nezicubu ukujiya. I ohlabayo kangaka, ngaphansi kubalulekile ukushiya esiqiwini. Emgqeni ongezansi, ukusika indwangu ngokweqile nokusebenzisa overlock aphathe onqenqemeni engezansi. Kungashiwo okufanayo kwenziwa kusetshenziswa amazombe. Ngezinye amamilimitha angu ezimbili ngenhla ulayini umphetho Stitch trouser eluka.
Kufanele uqaphele ukuthi trouser ibhande elisha kufanele ofakwe amanzi ashisayo, wasiqashisa kuphole ke kukuhle umusi. Okucindezelayo ibhulukwe ingelashwa tape entsha akunakwenzeka - phakathi imikhiqizo wokuwasha, kungaba oluhlehlela bese udonsa phansi ibhulukwe. Songa Indwangu ngendlela yokuthi amateyipu babe amamilimitha angu amabili ohlangothini front. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi ibhulukwe azigugi kwesikhathi. Okucindezelayo tape kumele isandla kuqala, ukuze lula suturing kanye ayina. Ngakho-ke, inkulumo ethi manje mayelana nendlela Umphetho ibhulukwe ngesandla.
Kungenzeka ukusebenzisa ngethephu enamathelayo, kuvuleke kwesisekelo salo lendwangu umphetho ke ironed nge umusi. Nokho, le ndlela has ethile abalulekile - enqubeni yokugeza tape kungase ikhasi off. Ngakho-ke, enokwethenjelwa okucindezelayo ibhulukwe uhlangothi, inaliti mncane intambo mncane.
Lapho umsebenzi oyinhloko usuphothuliwe ngaphandle kokukhipha imishanelo, progladte kokubili emlenzeni, bese ususa intambo ngokweqile futhi bamba ithambo le ibhulukwe phansi futhi.
Ngaphambi okucindezelayo ibhulukwe ezenziwe ngelineni elicolekile, jini noma ukotini imikhiqizo, cwilisa nabo imizuzu 30 ngamanzi afudumele. Lezizinto "hlala phansi" in the ukugeza. Uvolo ibhulukwe akudingekile ukuzigeza kahle ngokwanele ukuba ironed ngokusebenzisa manzi indwangu gauze, kulesi simo noboya unika ukuncipha esiphezulu.
Namuhla okufundile nendlela Umphetho kwesokudla ibhulukwe amadoda zakudala sika. Manje ungenza umsebenzi ngezandla zabo, ngaphandle asebenzise usizo ochwepheshe. Ngendlela efanayo, nawe uzokwazi Umphetho isiketi noma ingubo.
Kanjani ukuze ufunde ukuthi obumbene: Wabasaqalayo imiyalelo elula
Ukukhwabanisa. Article 160 Criminal Code
Ubuholi ekukhanyeni enye eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma
Usizo Legal uma ingozi